गल्ती गर्ने परीक्षक अन्याय भोग्ने परीक्षार्थी - Sabal Post
गल्ती गर्ने परीक्षक अन्याय भोग्ने परीक्षार्थी
२५ असार २०७६, बुधबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
काठमाडौँ – माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)का उत्तरपुस्तिका परीक्षकले परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क जोड्न गल्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट यस्तो तथ्य फेला परेको हो । नतिजाप्रति चित्त नबुझाई पुनर्याेगका लागि आवेदन दिएका कतिपय परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क परिवर्तन हुने गरेको छ । प्राप्ताङ्क परिवर्तन भएकाका एक हजार २०४ वटा उत्तरपुस्तिकामाथि गरिएको अध्ययनले परीक्षकको गल्ती ६३ प्रतिशत रहेको औँल्याएको छ ।
सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत गल्ती कभर पेजमा अङ्क चढाउन छुटेको पाइएको छ । अध्ययन गरिएका उत्तरपुस्तिकाको १८ प्रतिशतमा प्राप्ताङ्कको जोड नै गलत गरेको देखिएको छ । डिकोडिङ बिग्रिएको, झट्ट पढ्न नसकिने अङ्क, परीक्षण गर्न छुटेको, अङ्क यताउता पारी लेखिएको, सम्परीक्षकले गलत अङ्क लेखेको, इन्ट्री गलत गरेको लगायतका गल्ती देखिएका छन् । परीक्षकले गल्ती गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो । उनीहरूको लापरबाहीले गर्दा परीक्षार्थीहरू अन्यायमा पर्दै आएका छन् । पुनर्याेगका लागि आवेदन दिई नतिजा परिवर्तन भएकाहरूले न्याय पाए पनि नतिजाप्रति चित्त बुझाउनेहरूमाथि परीक्षकले अन्याय गर्दै आएका छन् ।
लामो समयसम्म परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सेवा गर्नुभएका पूर्वपरीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले परीक्षक र सम्परीक्षकले गल्ती गर्ने गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “धेरै परीक्षकले प्राप्ताङ्क चढाउँदा नै गल्ती गर्छन् । कतिपयले उत्तर जाँच्न छाडिदिन्छन् । टेबुलेसनको अङ्क जोड्न छुटाउँछन् । उनीहरूको लापरबाहीले यस्तो हुँदै आएको छ । ” २०७५ सालको एसईई परीक्षाको नतिजाप्रति चित्त नबुझाएर आवेदन दिनेहरूको लाम पनिकामा बाक्लै देख्न पाइन्छ । यस पटक चार जनाले आठवटै विषयमा पुनर्याेगका लागि आवेदन दिएका छन् ।
पनिकामा मङ्गलबारसम्म करिब छ हजारले आवेदन दिएको जानकारी दिइएको छ । गत वर्ष नौ हजारले आवेदन दिएकोमा ८२७ जनाको प्राप्ताङ्क परिवर्तन भएको थियो । पनिकाको अध्ययनले सबैभन्दा बढी गल्ती गर्ने परीक्षकपछि डिकोडर र सम्परीक्षक रहेको देखाएको छ । पनिकाका कर्मचारीको गल्ती पनि देखिएको छ । विद्यार्थीका कारण पनि गल्ती हुने गरेको पाइएको छ । सोही अध्ययनले परीक्षकले अङ्क चढाउँदा सबैभन्दा बढी गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षकले गर्ने गरेको गल्तीको ६७ प्रतिशत अङ्क चढाउँदा गल्ती हुने गरेको छ । झण्डै २९ प्रतिशत गल्ती परीक्षकले प्राप्ताङ्क जोड्दा हुने गरेको छ ।
परीक्षकले गरेको गल्तीलाई सच्याउन सम्परीक्षकको व्यवस्था हुने गरेको छ तर सम्परीक्षकले पनि निकै लापरबाही गर्ने गरेको पाइएको छ । सोही अध्ययनले सम्परीक्षकले अङ्क नै नबुझिने गरी लेख्दा, परीक्षण छुटाउँदा र अङ्क यताउता लेखेका कारण प्राप्ताङ्क परिवर्तन भएको प्रस्ट गरेको छ । “परीक्षक र सम्परीक्षकले बाहिरी पानामा लेखेको कुल प्राप्ताङ्क पढ्न नसकिने उल्लेख्य मात्रामा रहेको पाइन्छ”, पनिकाको अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । पनिकाको अध्ययनबाहेक व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक डा. अमुदा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत वर्ष गठित कार्यदलले पनि नमुनाका रूपमा केही उत्तरपुस्तिका अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनका क्रममा पनि परीक्षकको गल्ती बढी फेला पारिएको थियो । डा. श्रेष्ठले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा गल्ती हुनुलाई मानवीय कमजोरीको संज्ञा दिँदै भन्नुभयो, “विद्यार्थीले पनि गल्ती गर्ने गरेको पायौँ । उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा बढी सजग र संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ । ”
पनिकाले अध्ययनपछि परीक्षक तथा सम्परीक्षकलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा अनिवार्य रूपमा भित्रको अङ्क दोहो¥याएर जोड्न लगाएपछि मात्र प्राप्ताङ्क महलमा लेख्न लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले सबैले गम्भीर रूपमा जिम्मेवारी पूरा नगरिँदिदा गल्ती हुने गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “समान्य त्रुटि गर्नेलाई कारबाही गरिएको अवस्था छैन । ठूलो गल्ती गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने भन्ने छ तर त्यस्तो अवस्था आइसकेको छैन । सामान्य गल्तीलाई मानवीय त्रुटिका रूपमा लिने चलन छ । – गोरखापत्र
दाङमा चुनावी रौनक : बिमला र केशवराजबीच…
शिक्षक सेवा आयोग : प्राथमिक तहको नतिजा…
सिरियाका पौने दुई लाख शरणार्थी लेबनानबाट घर…
‘ऊँ’ शब्दको वास्तविक अर्थ थाहा छ?
यस्ता गुण एव् चरित्र भएकी स्त्री जाती…
दोस्रो अन्तराष्ट्रिय त्रिपिटक च्याण्टिङ्गको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलद्वारा…
अमेरिकाको कामदार भिसा खुल्ला
प्रदेश २ कै नमुना ह्याच्री उधोग सिरहाको लहानमा संचालन
कर्णाली प्रदेशमा सुशासनका लागि युवा कार्यक्रम सम्पन्न
शनिदेबको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस
स्व.वि.यु विहिन क्याम्पस बनाउन सरकार नै लाग्यो : महामन्त्री पाण्डेय
सभापति श्रेष्ठको निधन प्रती भरत कुमार शाहद्वारा दुख व्यक्त
रोट्रयाक्ट डाउनटाउनको साप्ताहिक कार्यक्रम
शाइन रेसुंगा बैंक सामाजिक कार्यमा सक्रिय: बनाइदियो मन्दिरमा ट्रष्ट
बर्दघाट खानेपानीका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुले लिए सपथ
गुल्मीको धुर्कोटमा बेवारिसे शव फेला